ထုတ်လုပ်သောနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်လေဟာနယ် emulsifying ရောနှော ဂျင်းလေး မြင့်မားသော viscous ပစ္စည်းများရောနှောခြင်း၏သုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို system ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းတစ်ခု In- ရေနွေးအိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစနစ်, တုန်လှုပ်စေသောစနစ်, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်/ emulsifying စနစ်၊ အပူပေးစနစ်၊ လေဟာနယ်ဖိအားစနစ်၊ အပူချိန်နှင့်ဖိအားအာရုံခံစနစ်၊ ဓာတ်လှေကားစနစ်၊
ဖောက်သည်များရွေးချယ်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းအမျိုးအစား၊ ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားများရှိပြီးဖောက်သည်များ၏ထူးခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များအရကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
၁။ အလှကုန်လုပ်ငန်း: နှုတ်ခမ်းနီ၊ အသားအရေ၊ ဂျယ်လ်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ ဆေးဝါးခရင်မ်၊ ခရင်မ်၊
၂။ စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း: mayonnaise, သုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်၊ နှမ်းဆော့စ်၊ analogue ဒိန်ခဲ၊ ချောကလက်၊
1. စွမ်းရည်: 10L, 20L, 50L, 100L, 200L, 300L, 500L, 1000L;
2. ပစ္စည်း: သံမဏိ 304 / 316L;
3. ဗို့အား:3အဆင့် 220/380 / 415V, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံစံချိန်စံညွှန်းမီစိတ်ကြိုက်;
4. အပူအမျိုးအစား: လျှပ်စစ်, ရေနွေးငွေ့;
6. ရောစပ်အမျိုးအစား: ခြစ်, 0-63rpm;
မြင့်မားသောညှပ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း / emulsifying ရောနှော, 0-2880rpm;
၈။ ဆေးချ: လက်ဖြင့် tilt သို့မဟုတ် auto tilt;
1.Raw material tank - ကုန်ကြမ်းအတွက်ရေ / ရေအဆင့်ရောစပ်သည့်တင့်၊
အထွေထွေနည်းပညာဆိုင်ရာ parameter သည်စားပွဲပေါ်မှာ
အလုပ်လုပ် Volume ကို